5 data disconnects na ajọ echiche echiche azụmaahịa | Martech Zone
Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Satọdee, Nọvemba 28, 2015 Douglas Karr
N’oge na-adịbeghị anya, anyị gbalịrị nnwale ahụmịhe onye ọrụ nke saịtị anyị, ma kewara nsonaazụ ya. Ndị na-ege ntị hụrụ ọdịnaya anyị n'anya mana mgbasa ozi anyị kpasuru iwe - ọkachasị ebe ọ na-abanye ma ọ bụ na-apụta. Ọ bụ ezie na ule ahụ gosipụtara nhazi nke saịtị anyị, ịdị mfe nke igodo, na ogo ọdịnaya anyị - ọ rụtụrụ aka na ihe na-ewute ndị na-ege anyị ntị.
Nkwụpụ a bụ ihe ọ fọrọ nke nta ka ndị ahịa ọ bụla dozie, okwu azụmaahịa na-agbatakarị mmeghachi omume ma ọ bụ echiche nke ndị na-ege ntị. N'ezie, ịghara ige ndị na-ege gị ntị ntị bụ eziokwu, nye ọtụtụ ndị ndụmọdụ ndụmọdụ guru ahịa nọ ebe ahụ kwenyere ịza, ị ,a ntị na ịgbaso ndụmọdụ nke ndị na-ege ntị kwesịrị ibute ụzọ mgbe niile.
Ndị a bụ 10 Disconnects na Nkwenye Azụmaahịa anyị na-emekarị nke ahụ dị egwu maka azụmahịa anyị.
Anya isi na ndị ahịa niile ha nhata - MarketingSherpa na nso nso a nyere nyocha nke ndị ahịa ji eso ụdị ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta. Chaatị ahụ gosipụtara n’ụzọ doro anya na imirikiti ndị na-azụ ahịa na-agbaso ụdị maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka nkwụlata ego, akara aka, kupọns, wdg. Agbanyeghị, eserese ahụ egosighi gị uru echiche ndị ahịa ọ bụla bara. Mwepu ego dị ọcha nwere ike iweda akara gị ala ma lie ụlọ ọrụ gị. M ga-adị njikere ịkụ nzọ na ndị ahịa ahụ hụrụ otu ụdị ndụ ha na-akwado ma na-akwado ọrụ ebere ha bara uru karịa ogologo oge maka ahụike azụmahịa nke ụlọ ọrụ.
Anya isi na ndị ọbịa niile bụ atụmanya - you maara na okporo ụzọ Bot karịrị 56% nke nchịkọta esoro okporo ụzọ na saịtị gị? Ka ị na-asụgharị gị nchịkọta data, olee otu bots si emetụta peeji nke ụzọ mbata na ụzọ ọpụpụ, ọnụego bounce, oge na saịtị, wdg? Ha nwere ike skewing ọnụ ọgụgụ dị njọ nke na a kpaliri gị ịgbanwe saịtị gị na nzaghachi… mana nzaghachi bụ bots, ọ bụghị atụmanya! Ka anyị na-enyocha saịtị anyị, anyị na-etinyekwu uche maka nleta dị mma - ndị mmadụ na-eleta ọtụtụ peeji ma na-etinye ihe karịrị otu nkeji na saịtị anyị.
Iche na Nzaghachi Ndị Ahịa Ga-eme Ka Ngwaahịa Gị Ka Mma - Arụrụ m ọrụ maka onye na-eweta SaaS gigantic onye nwere usoro mmepe ihe ike nke webatara ọtụtụ puku ndozi na ọtụtụ atụmatụ na nhapụ ọ bụla. Ihe si na ya pụta bụ ikpo okwu nke jupụtara na mgbagwoju anya, nke siri ike itinye, kpatara ọgba aghara mmepe na-adịghị agwụ agwụ, ma belata njide ndị ahịa anyị. N'ihi ya, ahịa bịara na-eme ihe ike ike, e kwere nkwa atụmatụ ndị ọzọ, usoro a malitere. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ toro ego ma zụta ha maka nnukwu ego, ha enwetabeghị uru ọ bụla. Mgbe ị jụrụ onye ahịa ihe ị kwesịrị imeziwanye, onye ahịa ahụ na-achọta mmejọ ozugbo ma nye onwe ha, mmeghachi omume na-adịghị mma. Kama, ikwesiri inyocha omume ndị ahịa gị iji dozie ndozi ngwaahịa gị.
Anya isi na-egbochi gị iwe iwe - Anyị anwalela ugboro ugboro na, na-enweghị mgbaghara, anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị na-emejuputa teknụzụ na-egbochi mmadụ ijide nleta onye ọbịa ma mee ka ha kpebie ma ha na ndị ahịa anyị agaghị agbakwunye. Jụọ ndị ọbịa gị ma ọ bụrụ na ọ masịrị ha iji usoro nkwado ị na - ebugharị, ma ha na - asị mba. Ma mgbe ahụ idokwa usoro nkwado ahụ ị ga - ahụ otu ndị ọbịa ahụ kwuru na ha enweghị mmasị na ha bụ ndị ịpị ma soro gị.
Na-eche na ị ghọtara onye ahịa gị - Ndị ahịa anyị na-echekarị ihe kpatara ndị mmadụ ji azụ ha - ọnụahịa, nnweta, ego, ọrụ ndị ahịa, wdg. Mgbe ị jụrụ onye ahịa ihe kpatara ha ji zụta n'aka gị, ha nwedịrị ike ịgwa gị ihe kpatara ya. Mgbe ị dabere na njirimara mbụ ma ọ bụ nke ikpeazụ, ị na-eche echiche ọjọọ. Ohere data nwere ike inye ihe akaebe nke atụmanya na-eme ihe, mana ọ bụghị ihe kpatara ha ji zụta ya. Nnyocha Persona dị oke mkpa maka nghọta onye zutara gi na ajuju ajuju site na ndi ozo na-adighi nma ihe mere ha ji zụta n'aka gị. Echekwala na ị mara, ihe ọ ga-arụ ga-eju gị anya.
Isi okwu a, n'ezie, bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịwa ahia ruru eru site na ike nke gị nchịkọta data. Must ga-eme mkpebi mkpebi banyere ihe na-adọta ma na-etinye akụkụ ahụ aka, agbanyeghị. Ebe nrụọrụ weebụ gị adịghị ebe ahụ iji mee onye ọ bụla obi ụtọ; ekwesiri ile ya anya dika ihe ahia nke na-adota ma na-eme ka ndi obia bia, na-eme ka ha gbanwee.
Emere m ụdị nsogbu ahụ na azụmaahịa m. M gere ntị na ọtụtụ ndị bụ ndị mgbe aga ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị na-agwa m otu m kwesịrị isi gbanwee onyinye na mmefu anyị. Ọ fọrọ nke nta ka anyị kwụsị anyị azụmahịa. Agaghịzi m ege ndị a ntị - ana m agbanye isi ma na-eme ihe m maara na-arụ ọrụ maka ndị ahịa anyị. Ihe na-arụ ọrụ maka ha abụghị nke na-arụ ọrụ maka gị ma ọ bụ m.
Kwụsị ime echiche ahịa site na ịge ntị na ikiri onye ọ bụla nke ahụ metụrụ ika gị. Bido imeziwanye ahụmịhe gị nye ndị na - ege ntị ihe dị mkpa… ndị na - ege ntị nwere ike zụta n'aka gị.
Tags: nzaghachi ndị ahịadata wepudiv popsna-egbochi mgbasa oziechiche ahia ahiaihie ahiaahia ruru erupopupnkwalitendị ọbịa na atụmanya